SIDA LOO DABOOLO YUQUA XILLIGA JIILAALKA? SIDA LOO DARYEELO WARSHADDA GOOBTA, SIDA LOO DIIRIYO OO LOO ILAALIYO, WAA MAXAY TABABARKA LOO BAAHAN YAHAY? SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo daboolo loona kululeeyo yuqua jiilaalka? Sidee loo qorsheeyaa xilliga nasashada ee guriga?
Caleenta cufan oo caleemo qafiif ah ayaa soo jeediya fikradaha laanta caleenta iyo dalal diirran.
Runtii iyadu hooyo - Bariga iyo koonfur bari; Yaaqada nacasta ah ayaa si guul leh loogu koray dhaqanka qolka.
Isla mar ahaantaana, xaaladaha kaabiga dhexe, dhirta qalaad ayaa kaliya ma aha ubaxaa xilliga xagaaga, laakiin waxay sidoo kale kor marinayaan berrinka bannaan, oo joogteynaya labaatan digrii oo baraf ah.
Sidee jakaski guriga dhexdiisa? Sidee u ilaalin kartaa diirimaadka jacaylka jiilaalka dibedda? Miyaan u baahanahay inaan daboolo? Waan ka wada hadli doonnaa tan hoose.
Jiilalka dhaqanka qolka
Waa maxay daryeelka guriga ee loogu talagalay yuqua xilliga jiilaalka? Waqtiga sanadka ee loo yaqaan 'yucca filito' ayaa loo baahan yahay xilliga hurdada ah ee biyo nadiif ah. Heerkulka waa in la yareeyo 10-12ºC; ugu fiicnaantu waxay noqon doontaa mawduuc si fiican u kulul, laakiin balakoon aan kululayn.
Maalin iftiin ah, hubso inaad dherjiso (iyadoo la adeegsanayo iftiin dheeraad ah) ilaa 16 saacadood.
Hardy, dhirta undemanding wuxuu ku noolaan karaa jiilaalka iyo waxyaabo diirran oo gudaha ah iyada oo qaabka caadiga ah ee qoyaanka ee isku dhafan oo leh dabiici ah muddo dheer oo qurux badan abuuray.
Si kastaba ha noqotee, xaaladaha noocaas ah, yuqua waxay lumisaa awoodda ku filan oo xoog ah, marka ay jirto iftiin la'aan waxay samaysaa caleemo xanuun leh oo daciif ah.
Jiilaalka dhulka banaan
Miyaan u baahanahay inaan daboolo yuqua beerta jiilaalka? Waa maxay diyaarinta loo baahan yahay xilliga qaboobaha? Dhibaatada ugu weyn ee dayactirka xilliga qaboobaha ee yucca ee goobta waa in bixiyaan hoy ku filan oo lagu kalsoonaan karo isla markaana waqti isku mid ah iska ilaali in uu hoos u dhigosidaas darteed caleemaha aan la jajabin
Dhirta dhalinyaradaKa badbaadi jiilaalka koowaad, waxaa lagu dabooli karaa weel balaastiig ah oo iibiya biyaha cabitaanka, oo hoos loo gooyo. Awoodda noocan oo kale ah ayaa lagu cadaadiyaa sida qotada dheer ee dhulka ah waxayna si fiican u rusheeyeen geesaha si aaney u jari doonin dabaylaha qaboobaha.
In qaangaar qaangaar ah oo qaangaar ah xilliga dayrta, ka dib marka uu dhaxlo habeenkii ugu horreeyay, cimilada qalalan, caleemaha waxaa lagu xiraa xirmo caadi ah oo dhexdhexaad ah si ay ugu dhowaadaan ilaalinta korriinka bartamaha. Dareemo mitir mitir ayaa loo habeeyaa hareeraha dhirta, oo lagu daboolay qalab ku habboon (spunbond, lutrasil) iyo cidhifyada qalabkani waa mid go'an.
Sida loo daboolo yuqua xilliga jiilaalka? Sawirrada fursado kala duwan oo loogu talagalay hoyga jiilaalka ee cimilada kala duwan.
Guga, ka dib markii hoyga laga saaro, ee kiiska dhirta, caleemaha ayaa mar kale ku xiran xirmo, iyo ugu dambeyntii la sii daayo ka dib markii khatarta ah ee uu barafku ka gudbay. Qaybaha waxyeelada leh waa la jarjaray.
Haddii kiciyeyaasha gobolka ee aaney aad u daraneyn, hut ma dhisi karo. Xaaladdan oo kale, caleemaha la xidhiidha ayaa lagu darayaa taageerada garabka; goobada basal waxaa lagu diiriyaa caleenta caleenta, mulch ama roodi dhererkiisu yahay 15-20 cm oo dheer.
Mararka qaarkood, sida ilaalinta dheeriga ah ee wareegga hoose, caleemaha hoose, caleemaha hoose ayaa looga tagayaa si ay u been abuuraan dhulka. Xidhmee qaybta dhexe ee geedka.
Xaaladdaas haddii dhaxan adag tahay, hoy-hawo qalalan ayaa lagu rakibay, oo ka kooban sanduuq alwaax ah, kaas oo daboolaya rinjiga (isbaarada, lutrasil, xumbo). Lakabka caleenta qallalan ee la qalajiyey ayaa la dhigayaa dusha sare, ka dibna magangalyada jiilaalka waxaa lagu daboolaa caag balaastig ah oo lagu rusheeyaa geesaha. Sida caadiga ah, hoyga hoyga ee hoyga ah wuxuu hayaa caleemo.
Qaybta dhexe Mashruuca Maraykanka - Yaqiinka Jilicsan - wuxuu awoodi karaa inuu ku guuleysto jiilaalka bannaanka u furan ee hoyga si habboon loo hirgeliyo oo uu ku xoqo xoog cusub oo xagaaga ah, isagoo ku farxaya kaliya hal weji mitir "shumac" leh jilbaha-kareemada, laakiin sidoo kale ari dabacsan oo haboon.
Dhaqanka qolka, way adagtahay in la gaaro cilladda noocan oo kale ah, sababtoo ah qolal diirrani ma ogolaanayaan yuqua inay bixiyaan xilli qabow oo quruxsan, markaasoo ciidamadu u ururaan ubax.